44-ta Cayaarood ee Guddiga ugu Wanaagsan ee Carruurta da' ahaan | I sii wakhti firaaqo
I sii wakhti firaaqo
Ciyaaraha guddiga ee ugu fiican carruurta
Isaac | 17/12/2021 17:48 | La cusbooneysiiyay 21/12/2021 09:01 | General
Markaad dooranaysid ciyaaraha looxa ugu qosolka badan, dhowr arrimood waa in la tixgeliyo. Dhinaca kale, da'da ku habboon ee ciyaartaas loo qorsheeyay. Su'aal kale ayaa ah ma kaligiis ayuu la ciyaari doonaa mise caruur kale, mise wuxuu la ciyaari doonaa waalidkiis ama dadka waaweyn, maadaama ay sidoo kale jiraan. ciyaaraha looxa loogu talagalay qof walba. Dabcan, haddii ciyaartu tahay mid waxbarasho iyo sidoo kale madadaalo, si aad ah ayey u fiican tahay.
Hagahan waxaad ku heli doontaa dhammaan agabka aad u baahan tahay dooro kan ugu fiican ciyaaraha looxa carruurta, marka lagu daro inay sidoo kale leeyihiin qayb gaar ah ciyaaraha guddiga waxbarashada. Beddel badan oo caafimaad iyo bulsheed ka badan oo loo beddelo consoles-yada iyo ciyaaraha fiidyaha. Waxay xitaa kula taliyaan khabiiro ku takhasusay horumarinta ilmaha yar, maadaama ay horumariyaan xirfadaha dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa wanaagsan, u fiirsashada, aragtida goobta, feejignaanta, mala-awaalka iyo hal-abuurka, go'aan qaadashada, iwm. Shaki la'aan hadiyad weyn ...
1 Ciyaaraha looxa ugu iibinta badan ee carruurta
1.1 Ciyaaraha Trajins - Virus
1.2 Magilano SKYJO
1.5 Educa - Lynx
2 Ciyaaraha looxa ugu fiican ee carruurta da' ahaan
2.1 Loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 2 illaa 3 sano jir
2.1.1 Goula 3-da Doofaar ee yaryar
2.1.2 Caqli-xumo waxaan wax ku bartaa sawirro
2.1.3 BEAN Adela shinnida
2.1.4 BEAN marka hore Miraha
2.1.5 Falomir Spike Pirate
2.2 Loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 4 illaa 5 sano jir
2.2.1 Ha toosin aabbe!
2.2.2 Hasbro madax adag
2.2.3 Hasbro Sloppy Plumber
2.2.4 Goliath Anton Zampon
2.2.5 Goliath daanka
2.2.6 Disset Party & Co Disney
2.2.7 Hasbro Scooper
2.2.8 Hasbro Yaxaaska Toothpick
2.2.9 Lulido Grabolo Jr.
2.2.10 Falomir maxaan ahay?
2.3 Ciyaaraha looxa ee carruurta da'doodu u dhaxayso 6 iyo 12 jir
2.3.1 Hasbro Monopoly Fortnite
2.3.2 Ravensburger Minecraft Builders & Biomes
2.3.3 Kubadda Dragon Ball
2.3.5 Devir The Magic Labyrinth
2.3.6 Qasriga argagaxa
2.3.7 Disset Party & Co Junior
2.3.8 Hasbro Operation
2.3.9 Hasbro waa kuma?
2.4 Ciyaaraha guddiga waxbarashada
2.4.1 Guriga rooxaanta
2.4.2 dabinka macbadka
2.4.3 Midabka midabka
2.5 Ciyaaraha looxa ee carruurta iyo dadka waaweyn
2.5.1 500 xujo xujo ah
2.5.2 Halxiraalaha 3D ee Nidaamka Qorraxda
2.5.3 Miiska ciyaaraha badan
2.5.4 Mattel Scrabble asal ahaan
2.5.5 Mattel Pictionary
2.5.6 Ku garaac!
2.5.7 Safarkii ugu horeeyay
2.5.8 Tilmaamaha Hasbro
2.5.9 Island The
3 Hagaha iibka ciyaarta looxa ee loogu talagalay carruurta aan qaan-gaarin
3.1 Lagu taliyay da'da ugu yar
3.4 Qaadashada iyo kala dambaynta
Ciyaaraha looxa ugu iibinta badan ee carruurta
Ka mid ah iibiyeyaasha ugu fiican, ama ciyaaraha looxa ee carruurta ugu iibinta fiican iyo guul, ayaa heerkaas iibka ah ku joogay sababo muuqda dartood. Waa kuwa loogu jecel yahay, uguna caansan, sidaas darteed waa in si gaar ah loo iftiimiyaa:
Ciyaaraha Trajins - Virus
Ciyaaraha Tranjis - Virus! -...
Waa mid ka mid ah iibiyeyaasha ugu fiican, mana aha wax ka yar. Waa ciyaar loogu talagalay 2 ciyaaryahan, laga bilaabo 8 sano jir oo ku habboon qoyska oo dhan. Waa wax la qabatimo oo aad u xiiso badan, si sahlan loo rari karo, oo aad wajihi doonto fayras la sii daayay. U tartamo si aad isaga ilaaliso cudurka faafa oo noqo qofka ugu horreeya ee cirib tira fayraska adiga oo go'doomiyay jir caafimaad qaba si looga hortago faafitaanka cudurrada xunxun.
Waa mid ka mid ah ciyaaraha guddiga kaadhka ee dhalinyarada iyo waayeelka. Waxaa loo ciyaaraa wareeg iyo wareeg, iyadoo leh qalooc waxbarasho oo sahlan si loo ciyaari karo bilowga hore. Intaa waxaa dheer, waxa ay sidoo kale leedahay qayb waxbarasho, oo leh ilaa 100 lambarro 2-god ah oo lagu celceliyo tirinta, iyo xisaabinta si loo hubiyo suurtagalnimada.
Zygomatic - Dobble -...
Laga bilaabo da'da 6 waxaad sidoo kale haysataa ciyaartan kale oo ka mid ah iibiyeyaasha ugu fiican. Ciyaar loox ku haboon qof walba, gaar ahaan xisbiyada. Waa inaad muujisaa xirfadaha xawaaraha, u fiirsashada iyo falcelinta, adigoo helaya calaamado isku mid ah. Intaa waxaa dheer, waxaa ku jira 5 minigames dheeraad ah.
Libellud Dixit asal ahaan -...
Waxaa la ciyaari karaa laga bilaabo da'da 8, waxayna noqon kartaa sidoo kale qoyska oo dhan. In ka badan 1.5 milyan oo nuqul ayaa la iibiyay iyo dhawr abaal-marinno caalami ah ayaa ah kaadhadhka wicitaanka ee ciyaartan. Caannimadiisu waa mudan tahay. Waxay leedahay 84 kaarar oo leh sawirro qurux badan, kuwaas oo ay tahay inaad qeexdo si saaxiibkaagii uu u qiyaaso, laakiin iyada oo aan kuwa kale ee kaa soo horjeeda samayn.
Educa - Lynx
Educa - Lynx-Daabacaadda
Laga bilaabo 6 sano jir waxaad haysataa ciyaarta guddigan si aad u wanaajiso falcelinta iyo feejignaanta aragga, taas oo ah, si aad u noqoto lynx. Waxa ku jira qaabab badan oo ciyaar ah, in aad hore u heshid sawiradaada sabuuradda oo aad hesho tirada ugu badan ee tiles ee suurtogalka ah.
Ciyaaraha looxa ugu fiican ee carruurta da' ahaan
Si aan kaaga caawino gudaha doortay, marka la eego tirada badan ee ciyaaraha looxa ee carruurta jira. Waxaa jira da' kasta iyo dhammaan dhadhanka, mawduucyada, taxanaha kartoonka, qoyska oo dhan, iwm. Halkan waxa aad leedahay dhawr qaybood oo loo qaybiyay da'da ama mawduuca:
Loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 2 illaa 3 sano jir
Tani waa mid ka mid ah cidhifyada ugu jilicsan, maadaama aysan ahayn ciyaar kasta oo looxa ah oo la qabsanayo kuwan aan qaan-gaarin, waana in fiiro gaar ah la siiyaa si loo hubiyo inay ammaan yihiin. Tusaale ahaan, waa in ay badbaadsan yihiin, waa in aanay yeelan qaybo yaryar oo la liqi karo, ama fiiqan, waxa ku jira iyo heerka ay joogaanba waa in ay noqdaan kuwa ugu sarreeya kuwan yaryar. Dhanka kale, waa inay sidoo kale la kulmaan sifooyin gaar ah sida muuqaal muuqaal ah, fudud, diiradda saaraya horumarinta xirfadaha sida xirfadaha dhaqdhaqaaqa, xirfadaha muuqaalka, iwm. Qaar Talooyin sax ah oo ku saabsan ciyaaraha guddiga carruurta laga bilaabo 2 ilaa 3 sano Waxay yihiin:
Goula 3-da Doofaar ee yaryar
Goula- Ciyaarta 3...
Sheekada caanka ah ee 3-da Doofaar Yaryar waxay isu rogtay ciyaarta loox ee kuwa yaryar. Iyada oo ay suurtogal tahay in lagu ciyaaro qaab iskaashi ama tartan. Waxaa lagu ciyaari karaa 1 ilaa 4 ciyaartoy, waxayna u adeegtaa horumarinta qiyamka kala duwan. Sida ujeedada, waxaa jira loox leh taxane taxane ah, guri yar, waxayna ku qasbanaan doonaan inay qaataan foornada doofaarka ee guriga ka hor intaanay yeeygu iman.
Iibso Saddexda Doofaar ee Yaryar
Caqli-xumo waxaan wax ku bartaa sawirro
Disset - Lectron waxaan bartay ...
Ciyaar kale oo waxbarasho oo loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 3 sano oo isku dayaya inay la xiriiraan su'aalaha iyo jawaabaha. Waxay heli doonaan madadaalo iyaga oo kor u qaadaya xirfadaha sida xirfadaha muuqaalka, kala soocidda qaababka, midabada, iwm. Waxa ay leedahay kaarar mawduucyo kala duwan ku saabsan iyo nidaam is-sixi doona si uu kan yar u hubiyo in uu si sax ah uga jawaabay iyada oo ay ugu wacan tahay qalinka sixirka ee iftiiminaya dhawaaqa sii daaya.
Iibso waxaan ku bartaa sawirro
BEAN Adela shinnida
Maya shinnidu maaha ta kaliya ee caanka ah. Hadda waxa u yimid ciyaartan guddiga sare ee cajiibka ah ee carruurta laga bilaabo 2 sano jir. Waa Adela shinnida, taas oo soo jiidan doonta dareenka kuwa yaryar sababtoo ah midabkeeda iyo ujeeddadeedu tahay in laga soo ururiyo nectar ubaxyada oo loo qaado rugta oo sidaas darteed awood u leh inay samayso malab. Marka dheriga malabku buuxo, waad guulaysan. Hab lagu xoojiyo dareenka midnimada, fahamka iyo barashada midabada.
Iibso Adela Shinnida
BEAN marka hore Miraha
Ciyaaraha HABA: Marka hore...
Ciyaar loogu talagalay carruurta 2 sano jir ah. Soo kabashada caadiga ah, sida El Frutal, laakiin loogu talagalay kuwa yaryar, la qabsiga sharciyada iyaga oo fududeynaya qaabka. Habka lagu hagaajinayo xirfadaha dhaqdhaqaaqa wanaagsan iyo iskaashiga, maadaama ay tahay inaad si wadajir ah u guulaysato, taasina waa inaad ku garaacdaa tukaha, taas oo aan cunin midhaha.
Iibso midhaha ugu horreeya
Falomir Spike Pirate
Falomir- Guji Burcad-badeedda
Tani waa ciyaar kale oo ka mid ah ciyaaraha ugu qosolka badan ee carruurta 3 sano jirka ah. Waxay leedahay saldhig foosto la dhigo, halkaas oo budhcad-badeedda laga keeno oo aan la garanayn goorta uu boodayo. Waxa ay ka kooban tahay seefaha foosta markooda loo galiyo, kan ugu horreeya ee budhcad-badeedda sameeyana wuu guulaysan doonaa.
Soo iibso Pin Pirate
Loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 4 illaa 5 sano jir
Haddii carruurta da'doodu ka weyn tahay, ciyaaraha da'da yar waxay noqon doonaan kuwo carruurnimo iyo caajis badan. Waxay u baahan yihiin ciyaaro gaar ah oo diiradda saaraya kobcinta noocyada kale ee xirfadaha, sida fekerka istaraatiijiga ah, xoogga saarista, xusuusta, iwm. Kuwaas carruurta da'doodu ka yar tahay 5 sano, waxaad ka heli kartaa ciyaaraha looxa oo aad u xiiso badan oo loogu talagalay carruurta suuqa:
Ha toosin aabbe!
Goliath- Ha kac...
Ciyaar xiiso leh oo loogu talagalay carruurta 5-sano jir ah taas oo ay tahay in ay ku wareegaan roulette oo ay horay u sii wadaan guddiga. Laakiin waxay ku qasbanaan doonaan inay si qarsoodi ah u sameeyaan, mar haddii aabbe sariirta ku seexday, haddii aad buuq samaysona waad toosinaysaa oo sariirta kuu diri doontaa (ku laabo barxadda hore ee looxa).
Iibso Ha kicin aabe
Hasbro madax adag
Hasbro Gaming 48380B09
Waa ciyaar loox loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 4 sano jir. Dameer aad u qallafsan oo shandadihii oo dhan laaday oo tuuraya, marka uu laadyo, nasiibku waa ka dhammaadaa, wax kasta oo aad saartay ayaa hawada u soo boodaya. Ciyaartan waxa ay leedahay 3 heerar dhib ah: bilow, dhex dhexaad iyo horumar. Waxay ka kooban tahay walxo isku-dul-saaran kooraha dameerka oo is-daba-joog ah.
Hasbro Sloppy Plumber
Ciyaarta Hasbro - Ciyaarta
Tuubiyahani waa bum weyn, bungler, wuuna dhibtoonayaa. Carruurta yaryari waxay ku qasbanaan doonaan inay qalabka suunka markooda dhigaan oo qalab kastaa wuxuu ka dhigayaa surwaalka in yar oo dheeraad ah. Haddii surwaalkaagu uu si buuxda u dhaco, biyuhu way qulquli doonaan. Kii aan qoysin kuwa kale wuu guulaysan doonaa.
Iibso Plumber Sloppy
Goliath Anton Zampon
Goliath - Anton Zampon, ...
Doofaarkan yar ee quruxda badan oo lagu magacaabo Antón Zampón ayaa tijaabin doona xirfadaha kuwa yaryar. Ciyaar fudud oo ka koobnaan doonta quudinta dabeecadda ilaa surwaalkiisu uu qarxo. Waxay ciyaari karaan markooda 1 ilaa 6 ciyaartoy, iyagoo ku raaxaysanaya hubinta inta hamburgers ee ay cuni karaan
Iibso Antón Zampon
Tani waa ciyaar kale oo looxa carruurta, halkaas oo aad ku tababaran karto kalluumeysiga ugu xiisaha badan. Tuburoonku waa gaajaysan yahay, oo waxa ay liqday kalluun yar oo badan oo aad ku badbaadinayso adiga oo afka kala soo baxay ul kalluumaysi. Laakiin iska jir, sababtoo ah wakhti kasta sharkku wuu qaniini doonaa. Xoolo kale oo aad badbaadin karto ayaa noqon doona kan guuleysta.
Soo iibso daanka
Disset Party & Co Disney
Disset- Party & Co Disney...
Xafladan ayaa timid, si gaar ah loogu nashqadeeyay carruurta da'doodu tahay 4 jir, oo wata mawduuca Disney. Ciyaar guddiyo kala duwan oo lagu barto laguna raaxaysto. Waxaa loo adeegsadaa qoyska oo dhan, iyagoo awood u leh inay ku gudbaan imtixaanno dhowr ah si ay u helaan tirooyinka jilayaasha ee warshadda khayaaliga ah. Tijaabooyinku waxay la mid yihiin Xisbiga dadka waaweyn, oo leh imtixaannada shaydaanka, sawiridda, iwm.
Iibso Party & Co
Hasbro Gaming - Kubadda Kubadda ...
Classic ah oo aan ka bixin qaabka. Boqolaal iyo boqollaal xayaysiis telefishan ah oo ku soo wajahan Christmas-ka ama waqtiyo kale marka iibinta alaabta carruurtu ku ciyaarto la kordhiyo. Ciyaarta looxa loogu talagalay kuwa yaryar oo ay hippos ay maamulaan afarta ciyaaryahan waa inay liqaan dhammaan kubbadaha suurtagalka ah. Kubbada ugu badan hela ayaa guuleysan doona.
Iibso Kubbada Afyare
Hasbro Yaxaaska Toothpick
Yaxaaskani waa hunguri weyn, laakiin cunista badan ee ilkahiisa aad uma fiicna, wuxuuna u baahan yahay baaritaan ilkeed. Ka soo bixi ilkihii ugu badnaa ee aad kari karto ka hor intaan afku xidhmin, mar haddii aad heshay iliga dhaawaca yaxaaskan wanaagsan. Ciyaar kale oo fudud oo dhiirigelisa qallafsanaanta iyo dhaqdhaqaaqa wanaagsan ee kuwa yaryar.
Iibso Yaxaaska Nuugista
Lulido Grabolo Jr.
Junior Grabolo, waan ciyaara...
Ciyaar loox waxbarasho oo xiiso leh oo loogu talagalay kuwa yaryar ee guriga ku jira. Aad ayey u firfircoon tahay waxayna kuu ogolaaneysaa inaad horumariso xirfadaha maskaxda, u fiirsashada, macquulka, iyo feejignaanta. Way fududahay in la fahmo, waxaad si fudud u rogi laadhuudhka oo waa inaad heshaa isku-dhafka ka soo baxay kaararka dhexdooda. Waxay u ogolaataa ciyaaraha degdega ah waxayna ku fiicnaan kartaa inaad safaro gasho.
Iibso Grabolo Jr
Falomir maxaan ahay?
Falomir- maxaan ahay...
Ciyaar looxa oo xiiso leh oo noqon karta mid la jecel yahay, xitaa qofka weyni inuu ciyaaro. Waxa ay kaa caawinaysaa in la horumariyo erayada la xidhiidha meheradaha, iyada oo madax madax ka ah halka la dhigo kaarka qof kastaa arko marka laga reebo adiga, waana in aad waydiisaa su'aalo si aad isku daydo in aad qiyaasto qofka uu yahay dabeecadda ka muuqata kaadhka. Ciyaartaani waxay ku fiican tahay horumarinta xirfadaha dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa, caqliga iyo dareenka.
Iibso maxaan ahay?
Ciyaaraha looxa ee carruurta da'doodu u dhaxayso 6 iyo 12 jir
Kooxda da'da ayaa lagu daray inta udhaxeysa 6 iyo 12 sanoWaxa kale oo jira ciyaaraha looxa oo aan caadi ahayn oo daboolaya baahiyaha da'dan. Maqaallada noocaan ah waxay inta badan leeyihiin caqabado kakan, waxayna soo bandhigaan horumarinta xirfadaha sida xusuusta, tabaha, macquulnimada, feejignaanta, hanuuninta, iwm. Kuwa ugu wanaagsan waxaa ka mid ah:
Monopoly Fortnite (Hasbro...
Monopoly Classic had iyo jeer waxay la mid tahay guusha, waligeedna kama baxayso qaabka. Hadda waxaa yimid nooc gebi ahaanba dib loo cusbooneysiiyay oo ku saleysan ciyaarta fiidiyowga Fortnite. Sidaa darteed, kuma salaysnaan doono qaddarka hantida ay ciyaartoydu gaadhaan, laakiin wakhtiga ay ku nool yihiin khariidada ama sabuuradda.
Ravensburger - Minecraft
Haa, ciyaarta fiidyaha ee caanka ah ee hal-abuurka iyo badbaadada Minecraft ayaa sidoo kale gaadhay adduunka ciyaaraha looxa. Ciyaaryahan kastaa wuxuu yeelan doonaa dabeecad u gaar ah, oo ururin doona tiro ka mid ah blocks khayraadka. Fikradda ayaa ah in lala dagaallamo makhluuqa adduun kasta. Guuleystaha ayaa noqon doona kan ugu horreeya ee ku dhammaystira looxa chips-kooda.
Kubadda Dragon Ball
Safarka Raacitaanka fudud...
Ma qiyaasi kartaa midaynta madadaalada caanka ah ee Trivial Pursuit trivia oo leh caalamka Dragon Ball anime. Hagaag hadda waxaad haysataa wax kasta oo ciyaartan ah oo leh wadar ahaan 600 su'aalood oo ku saabsan saga caanka ah si aad u muujiso aqoontaada ku saabsan jilayaasha aad jeceshahay.
Iibso wax yar
Cluedo da'da: Laga bilaabo 8 ...
Dil dahsoon ayaa dhacay. Waxaa jira 6 tuhmane, waana inaad u gudubtaa goobta dembiga si aad u ogaato tilmaamaha kuu horseedaya gacankudhiiglaha. Baadh, qari, eeday oo guulaysta. Mid ka mid ah ciyaaraha ugu fiican ee fikirka iyo xiisaha suuqa.
Devir The Magic Labyrinth
Devir The Labyrinth ...
Haddii aad jeceshahay waxyaalaha qarsoon ee qarsoon, tani waa ciyaartaada guddiga. Ciyaar fudud oo ay tahay inaad dhex marto majaajilo dahsoon si aad isugu daydo inaad hesho walxaha lumay. Waa inaad muujisaa dhiirranaan si aad isugu daydo inaad la baxdo walxaha oo aad marto marinnada shaybaadhka adiga oo iska ilaalinaya dhibaatooyinka kala duwan ee aad heli doonto.
Iibso Labyrinth-ka Magic-ka
Ciyaaraha Atom waxa ay horumariyeen ciyaartan looxa xiisaha leh ee cabsida leh, oo leh 62 kaarar oo leh jilayaal iyo walxo cajiib ah. Iyaga waxaad ku ciyaari kartaa siyaabo kala duwan (sida baaraha, qaabka xawaaraha, iyo xusuusta kale), hagaajinta xirfadaha carruurta yaryar ee guriga.
Iibso Qasriga Argagaxa
Disset Party & Co Junior
Disset - Game Party & co...
Nooc kale oo ah ciyaarta guddiga caanka ah ee Party & Co ee carruurta. Waxaad awoodi doontaa inaad samayso kooxo oo aad ku madadaasho inaad ku gudubto imtixaanada kala duwan. Qofka ugu horreeya ee gaadha fagaaraha ugu dambeeya wuu guulaysan doonaa. Si tan loo sameeyo, waa inaad gudubtaa imtixaannada sawir-qaadista, muusiga, dhaqdhaqaaqyada, qeexitaannada, su'aalaha, iwm.
Mid kale oo ka mid ah ciyaaraha qadiimiga ah, waa ciyaar ku fiday adduunka oo dhan oo tijaabisay karti iyo aqoon jidheed ee ciyaartoyga. Bukaanku wuu buka oo u baahan yahay in lagu sameeyo, lagana saaro qaybo kala duwan. Laakiin ka digtoonow, waxaad u baahan tahay garaaca wadnaha dhakhtarka qalliinka, sababtoo ah haddii qaybuhu taabtaan derbiyada sankaagu wuu iftiimayaa oo waad khasaari doontaa… Haddii aad jeceshahay kuwa yaryar, waxaa sidoo kale jira nooc ka mid ah jilayaashan.
Hasbro waa kuma?
Hasbro Gaming oo,...
Mid kale oo ka mid ah cinwaannada loo yaqaan dhammaan. Hal loox qofkiiba oo ay ku jiraan jilayaal taxane ah. Ujeeddadu waa in la qiyaaso dabeecadda dahsoon ee cadawga adiga oo waydiinaya su'aalo oo iska tuuraya jilayaasha aan ku habboonayn tilmaamaha uu ku siinayo.
Iibso waa kuma?
Ciyaaraha guddiga waxbarashada
Waxaa jira qaar ka mid ah ciyaaraha looxa loogu talagalay carruurta kuwaas oo aan kaliya ahayn madadaalo, laakiin sidoo kale Waa kuwa wax baranaya, markaa waxay wax ku baran doonaan ciyaarta. Hab lagu xoojiyo waxbarashada dugsiga iyada oo aan la gelin hawl caajis ah ama caajis ah oo iyaga u ah, taas oo ka koobnaan karta nuxurka dhaqanka guud, xisaabta, luqadda, luqadaha, iwm. Kuwa ugu fiican qaybtan waa:
Ciyaar halxiraale waxbarasho xiiso leh si loo horumariyo aragtida fog, xalinta mashaakilaadka, caqli gal leh caqabadaha heerka kala duwan, iyo u fiirsashada. Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu horumariyo xirfadaha garashada iyo fikirka dabacsan ee gamification.
Iibso Guriga Ruuxa
dabinka macbadka - caqli badan...
Ciyaarta guddiga waxbarashadu waxa ay xoojisaa caqligalka, fikirka dabacsan, aragtida aragga, iyo feejignaanta. Waxaad haysataa dhowr heerar oo dhib ah inaad ka doorato, oo leh 60 caqabadood oo kala duwan. Halxiraale oo awoodda maskaxeed ay fure u noqon doonto ciyaarta.
Iibso dabinka Macbadka
Ciyaarta guddiga waxbarashada ee la yaabka leh oo ay ciyaartoygu ku dhex wareegayaan midabada u taagan shucuurta ama dareenka, taasoo ka dhigaysa nooc waxbarasho shucuureed oo loogu talagalay carruurta da'doodu u dhaxayso 3 iyo 6 jir. Wax inta badan lagu illoobo dugsiyada oo muhiim u ah caafimaadka maskaxda iyo xidhiidhka dadka kale.
Iibso wuxuush Midabka
Ciyaar loogu talagalay carruurta ka weyn 4 sano oo ujeedadeedu tahay in lagu horumariyo xirfadaha luqadda Ingiriisiga iyo Isbaanishka. Si taas loo sameeyo, isticmaal kaarar taxane ah oo leh sawirro iyo kelmado ay tahay in ay xidhiidh la yeeshaan midba midka kale si uu si sax ah ugu dhigmo.
Ciyaar ay qoyska oo dhami ka qayb qaadan karaan, oo ay kuwa yaryari ku baran doonaan xayawaanka iyo juqraafiga. Iyada oo leh ilaa 72 xayawaanno kala duwan iyo tilmaamo ku qoran 7 luqadood (Isbaanish, Ingiriis, Faransiis, Jarmal, Talyaani, Holand iyo Boortaqiis).
Soo iibso Safari
Ciyaaraha looxa ee carruurta iyo dadka waaweyn
Waxa kale oo aad ka heli kartaa ciyaaraha looxa ee carruurta oo uu ilmuhu la ciyaari karo uu la socdo qof weyn, ha ahaato hooyo, aabbe, awoowayaal, walaalo waaweyn, iwm. Hab lagu daryeelo kuwa ugu yar ee guriga oo ay uga qaybgalaan ciyaarahooda, wax muhiim u ah iyaga iyo sidoo kale dadka waaweyn, maadaama ay kuu ogolaanayso inaad waqti badan ku qaadato oo aad si fiican u barato iyaga. Hubaal markay koraan ma ilaawi doonaan wakhtiyadii aad ku qaadatay ciyaaraha sida:
500 xujo xujo ah
Halxiraalaha 500 oo qaybood oo...
Halxiraalaha 500-xabo oo mowduuca laga soo qaatay adduunka Super Mario Odyssey Traveler World. Qaab qoys ahaan loo dhiso, oo ku habboon carruurta 10 sano jir ah. Marka la isku daro, waxay leedahay cabbirada 19 × 28.5 × 3.5 cm.
Halxiraalaha 3D ee Nidaamka Qorraxda
Ravensburger - Halxiraalaha 3D, ...
Habka kale ee loo ciyaaro oo wax looga barto xiddigiska waa in la dhiso halxiraalaha 3D ee nidaamka meeraha. Waxa uu ka kooban yahay 8 meerayaal oo ka mid ah Hab-dhiska Qorraxda iyo 2 giraan oo meere ah, marka lagu daro Qoraxda, oo wadartoodu tahay 522 qaybood oo nambaraysan. Marka xujada la dhammeeyo, waxaa loo isticmaali karaa qurxinta. Sida da'da ugu fiican, waa laga bilaabo 6 sano.
Iibso xujooyinka 3D
Miiska ciyaaraha badan
ColorBaby - Shaxda ...
Hal miis waxaad ku qaadan kartaa 12 ciyaarood oo kala duwan. Waxay leedahay cabbirro 69 cm sare ah, miiska dushiisana wuxuu leeyahay meel sare oo ah 104 × 57.5 cm. Waxaa ka mid ah ciyaarta-badan oo leh in ka badan 150 xabbo iyo sagxadaha la isweydaarsan karo ee lagu ciyaaro barkadda, kubbadda miiska, xeegada, ping-pong, chess, checkers, backgammon, bowling, shuffleboard, turubka, fardaha iyo laadhuu. Ku habboon carruurta da'doodu tahay 6 sano iyo qoyska oo dhan. Habka lagu caawinayo horumarinta xirfadaha dhaqdhaqaaqa, xirfadaha gacanta, fikirka macquulka ah, iyo barashada.
Iibso miiska ciyaaraha badan
Mattel Scrabble asal ahaan
Ciyaaraha Mattel Scrabble
Laga bilaabo 10 sano jir, ciyaartani waxay noqon kartaa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan iyo madadaalada qoyska oo dhan iyo da'da. Waa mid ka mid ah ciyaaraha aadka loo ammaano, iyadoo lagu raaxaysto ereyada higgaada si loo helo dhibcaha ugu sarreeya ee ereyada isdhaafsiga ee 7 tiles random ciyaaryahan kasta uu qaato. Hal dariiqo oo ay dheer tahay hagaajinta erayada.
Ciyaaraha Mattel- Sawir-gacmeed
Waa mid kale oo ka mid ah ciyaaraha ugu caansan, nooc ka mid ah ciyaarta sawir-gacmeedka caadiga ah kaas oo aad isku daydo inaad ku qiyaasto waxaad rabto inaad ku muujiso sawiradaada. Waa in loo ciyaaraa kooxo, waxayna ku geyn doontaa xaalado aad u xiiso badan, gaar ahaan xubnaha xirfadahooda sawireed ee Picasia ...
Ku garaac! - The...
Waa mid ka mid ah ciyaaraha guddiga ee kaa dhigi doona inaad dhaqaaqdo oo aad sameyso dhammaan noocyada imtixaanada waalan. Caqabadaha in laga gudbo, oo leh 160 imtixaan oo qosol leh kuwaas oo aad ku qasbanaan doonto inaad afuufto, dheellitirto, juglayso, booddid, raso, iwm. Qosolku waa ka badan yahay dammaanad qaadka.
Safarkii ugu horeeyay
Maalmo yaab leh-Ka hore...
Mid ka mid ah ciyaaraha ay dhallaanku jecel yihiin laakiin ku habboon qoyska oo dhan. Kuwa leh nafta tacaburiyeyaasha oo ku raaca safarkan xawaaraha dheereeya ee tareenka ee dhex mara magaalooyinka waaweyn ee Yurub khariidad weyn halkaas oo ay ku tijaabin doonaan. Ciyaaryahan kastaa waa inuu ururiyaa rarka gaadhiga si uu u dhiso wadooyin cusub oo uu u balaadhiyo isku xidhka tareenka. Ku alla kii dhameeya tigidhada meesha uu u socdo ayaa ku guulaysanaya ciyaarta.
Iibso safarka ugu horreeya
Ciyaarta Hasbro - Tilmaamaha
Haddii aad jeceshahay ciyaaraha diirada saaraya inay ku qosliso, markaa tani waa mid kale oo ka mid ah. La ciyaar qoyska oo dhan iyo asxaabta, oo leh 3 heerar xirfadeed oo kala duwan. Dhexdeeda waa inaad samaysaa jilitaan degdeg ah si aad isugu daydo in ay ku fahmaan, iyo sheeko ballaadhan oo leh 320 kaarar.
Asmodee- Jasiiradda -...
Ciyaarta guddiga waxay dib kuugu celinaysaa qarnigii labaatanaad, iyada oo ku dhex jirta sahaminta. Ciyaar tacabur ah oo jasiirad dahsoon laga helay badhtamaha badda oo uu halyeygeedu sheegay in ay qariso hanti qaali ah. Laakin tacabiirayaashu waa inay la kulmaan caqabado kala duwan, bahal badeed, iyo ... foolkaanno qarxinaya taasoo keeni doonta in jasiiradda ay si yar u degto.
Carcata - Ciyaarta guddiga iyo...
Carcata waxay isku daraysaa tacabur iyo xeelad. dhexdeeda waa in aad qabiilkiina ku dagaysaa jasiirad foolkaano leh oo aad tusto qabiilka ugu xoogga badan ee ka badbaada khatarta ay meeshani haysato. Ilaali aagaggaaga, la soco dhaqdhaqaaqa qabaa'ilka iska soo horjeeda, horay u soco, aruuriya GEMS, mar walbana isha ku hay ruux ilaalinaya jasiiradda ...
Soo iibso Carcata
Hagaha iibka ciyaarta looxa ee loogu talagalay carruurta aan qaan-gaarin
Sawir lacag la'aan ah (Ciyaarta guddiga carruurta ee Badda Battle) laga bilaabo https://torange.biz/childrens-board-game-sea-battle-48363
Doorashada ciyaarta looxa ma aha hawl fudud, maadaama ay jiraan qaybo iyo magacyo badan oo suuqa lagu soo bandhigay. Laakin doorashada ciyaarta looxa carruurta waa ka sii dhib badan tahay, sababtoo ah arrimaha qaarkood waa in la tixgeliyaa. badbaadada ilmaha yar:
Lagu taliyay da'da ugu yar
Ciyaaraha looxa carruurta sida caadiga ah waxay la yimaadaan calaamad muujinaysa ugu yar iyo da'da ugu badan kuwaas oo loogu talagalay. Shahaado ka dhigaysa inay ansax yihiin kooxdaas da'daas oo ku salaysan saddex shuruudood oo aasaasi ah:
AmnigaTusaale ahaan, carruurta yaryari waxay liqi karaan qaybo ay ka mid yihiin laadhuu, calammo, iwm. Waa muhiim in alaabtu ay haysato shahaadada CE, si loo ogaado inay ka gudubtay heerarka badbaadada EU. Ka digtoonow waxyaabaha been abuurka ah iyo waxyaabaha kale ee ay ku ciyaaraan ee ka imaanaya Aasiya iyaga oo aan la xakameynin...
XirfadahaCiyaartoyda oo dhami ma noqon karaan kuwo da 'kasta ah, qaar ayaa laga yaabaa in aan loo diyaarin kuwa yaryar, waxayna noqon karaan kuwo adag ama aan macquul ahayn, oo xitaa waxay ku dhamaan karaan niyad-jab iyo joojinta ciyaarta.
Mawduuc: waxa ku jira sidoo kale waa muhiim, maadaama qaar laga yaabo inay leeyihiin mawduucyo gaar ah oo loogu talagalay dadka waaweyn oo aan ku habboonayn kuwa aan qaan-gaarin, ama si fudud in koox gaar ah aysan jeclayn sababtoo ah ma fahmaan.
Habkani maaha mid muhiim ah, laakiin haa muhiim. Way wanaagsan tahay in la ogaado dhadhanka iyo dookhyada qaataha ciyaarta, sababtoo ah waxay jeclaan karaan nooc ka mid ah mawduuc gaar ah (sayniska, qarsoodiga, ...), ama inay taageere u yihiin filimada ama taxanaha telefishanka (Toy Story , Hello Kitty, Dragon Ball, Rugrats,…) kuwaas oo ciyaaruhu ay kugu dhiirigelin doonaan inaad sida ugu badan u ciyaarto.
Dabeecaddani maaha mid la xidhiidha qiimaha oo kaliya, laakiin sidoo kale waxay la xiriirtaa badbaadada ciyaarta (ma aha jajabyo qaybo yaryar oo keeni kara neefsashada, qaybo fiiqan oo keena dhaawacyo ...) iyo adkeysiga. Ciyaaraha qaarkood waxaa laga yaabaa inay u janjeeraan inay jabaan ama ay dhaqso u dhammaadaan, markaa tani waa wax la badbaadiyo.
Qaadashada iyo kala dambaynta
Arrin kale oo muhiim ah ayaa ah in la helo ciyaar soo gashay sanduuq ama boorso halkaas oo aad ku badbaadin karto dhammaan qaybaha. Sababaha arrintan fiiro gaar ah loo leeyahay waa:
Si qofka aan qaan-gaarin uu meel uga qaado si fudud.
Ha lumin qaybaha.
Ku dhiiri geli nidaamka marka ay ciyaartu dhammaato adiga oo ku martiqaadaya inuu soo qaado.
Taas si fudud ayaa loo kaydin karaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: I sii wakhti firaaqo » General » Ciyaaraha guddiga ee ugu fiican carruurta
Ciyaaraha guddiga Baxsashada Qolka ugu fiican
Ciyaaraha guddiga ugu fiican ee dadka waaweyn